Tag: rindrambaiko fitantanana tolo-kevitra
Alatsinainy Desambra 3, 2012 Alatsinainy Desambra 3, 2012 Jenn Lisak Golding
Nandritra izay roa taona lasa izay dia niova tanteraka ny varotra tamin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana niomerika. Manokana, ny fomba fandefasan'ny olona sy ny fahazoana tolo-kevitra momba ny varotra dia nohatsaraina tamin'ny fampivoarana ireo rafitra fitantanana tolo-kevitra momba ny varotra an-tserasera, toa ny mpanjifa TinderBox. Fa maninona ireo vahaolana ireo no tsara kokoa noho ny manoratra tolo-barotra amin'ny Microsoft Word fotsiny? Eny, nanao infographic iray manontolo momba an'io izahay. Mitombo be ny famokarana amin'ny fampiasana ny iray amin'ireto vahaolana ireto,